သီချင်းတွေအတူတူသီဆိုခဲ့ဖူးတဲ့ အဆိုတော်ကျားပေါက်ရဲ့ "ကြောက်ခေတ်" သီချင်းလေးကို ဝန်းရံပေးခဲ့တဲ့ ဖွေးဖွေး - Cele Connections
ပရိသတ်တွေချစ်ကြတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ဖွေးဖွေးကတော့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းက အနုပညာလောကထဲကို ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် အနုပညာသက်တမ်း (၁၃) နှစ်ကျော်တိုင်ရှိပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွေးဖွေးက သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ်သာမက သီချင်းဆိုလည်း ဝါသနာပါပြီး ငယ်စဉ်အခါက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပေါင်းပြီး ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ Art Of Depression Band မှာလည်း ပင်တိုင်အဆိုတော်တစ်ယောက်အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာလည်း ဖွေးဖွေးက သီချင်းတွေကို သီဆိုခဲ့ပြီး မကြာသေးခင်အချိန်ကပဲ သူမရဲ့ “ငါ့ကမ္ဘာထဲ” သီချင်းလေးကို ပရိသတ်တွေလက်ထဲ ထည့်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ ဖွေးဖွေးက သူမ အရမ်းကြိုက်ရတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်သလို သူမနဲ့အတူတူ သီချင်းတွေအတူတူသီဆိုခဲ့ဖူးတဲ့ အဆိုတော်ကျားပေါက်ရဲ့ “ကြောက်ခေတ်” သီချင်းလေးကို ဝန်းရံပေးခဲ့ပါတယ်။ ဖွေးဖွေးက ကျားပေါက်ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ “ကြောက်ခေတ်” သီချင်းလေးကို သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေ့ခ်ျမှာ Share ပြီး “This is the Dopest! 🤘✨✨✨💣❤🔥” ဆိုပြီး အရမ်းမိုက်ကြောင်း မှတ်ချက်ချခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖွေးဖွေးနဲ့ ကျားပေါက်ကတော့ “ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံ” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို အတူတူ သီဆိုခဲ့ဖူးပြီး ထိုသီချင်းလေးက ကျားပေါက်ရဲ့ Fan တွေကြားမှာသာမက ဖွေးစိန်ရဲ့ ပရိသတ်တွေကြားမှာပါ ရေပန်းစားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ကျားပေါက်ရဲ့ “ကြောက်ခေတ်” သီချင်းလေးကို နားဆင်ပြီးပြီလား ပြောခဲ့ကြပါဦးနော်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
သီခငျြးတှအေတူတူသီဆိုခဲ့ဖူးတဲ့ အဆိုတျောကြားပေါကျရဲ့ “ကွောကျခတျေ” သီခငျြးလေးကို ဝနျးရံပေးခဲ့တဲ့ ဖှေးဖှေး
ပရိသတျတှခေဈြကွတဲ့ မငျးသမီးခြောလေး ဖှေးဖှေးကတော့ ဆယျကြျောသကျအရှယျကတညျးက အနုပညာလောကထဲကို ဝငျရောကျခဲ့ပွီး အခုဆိုရငျ အနုပညာသကျတမျး (၁၃) နှဈကြျောတိုငျရှိပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖှေးဖှေးက သရုပျဆောငျတဈယောကျအဖွဈသာမက သီခငျြးဆိုလညျး ဝါသနာပါပွီး ငယျစဉျအခါက သူငယျခငျြးတှနေဲ့စုပေါငျးပွီး ဖှဲ့စညျးခဲ့တဲ့ Art Of Depression Band မှာလညျး ပငျတိုငျအဆိုတျောတဈယောကျအဖွဈ ပါဝငျခဲ့ပါသေးတယျ။ နောကျပိုငျးမှာလညျး ဖှေးဖှေးက သီခငျြးတှကေို သီဆိုခဲ့ပွီး မကွာသေးခငျအခြိနျကပဲ သူမရဲ့ “ငါ့ကမ်ဘာထဲ” သီခငျြးလေးကို ပရိသတျတှလေကျထဲ ထညျ့ပေးခဲ့ပါသေးတယျ။
ဒီကနမှေ့ာတော့ ဖှေးဖှေးက သူမ အရမျးကွိုကျရတဲ့ အဆိုတျောတဈယောကျလညျး ဖွဈသလို သူမနဲ့အတူတူ သီခငျြးတှအေတူတူသီဆိုခဲ့ဖူးတဲ့ အဆိုတျောကြားပေါကျရဲ့ “ကွောကျခတျေ” သီခငျြးလေးကို ဝနျးရံပေးခဲ့ပါတယျ။ ဖှေးဖှေးက ကြားပေါကျရဲ့ နောကျဆုံးထှကျရှိထားတဲ့ “ကွောကျခတျေ” သီခငျြးလေးကို သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျပခြေျ့မှာ Share ပွီး “This is the Dopest! 🤘✨✨✨💣❤🔥” ဆိုပွီး အရမျးမိုကျကွောငျး မှတျခကျြခခြဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဖှေးဖှေးနဲ့ ကြားပေါကျကတော့ “ကိုယျဖွဈကိုယျခံ” ဆိုတဲ့ သီခငျြးလေးကို အတူတူ သီဆိုခဲ့ဖူးပွီး ထိုသီခငျြးလေးက ကြားပေါကျရဲ့ Fan တှကွေားမှာသာမက ဖှေးစိနျရဲ့ ပရိသတျတှကွေားမှာပါ ရပေနျးစားခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး ကြားပေါကျရဲ့ “ကွောကျခတျေ” သီခငျြးလေးကို နားဆငျပွီးပွီလား ပွောခဲ့ကွပါဦးနျော။ ဖတျရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
သမီးဖြစ်သူရဲ့ မင်္ဂလာပွဲမှာ သူ့ဖုန်းလေးနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက် မှတ်တမ်းတင်ရမှ ကျေနပ်သွားတဲ့ ဖေဖေ့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းပုံကို ပြောပြလာတဲ့ အမွန်း
အနုပညာလောကသားအားလုံးသိကြတဲ့ မြင့်မြတ်ရဲ့ စိတ်နေသဘောထားအပေါ် အာမခံပြီးပြောလာတဲ့ K ညီ